Clamping Factory, mpamatsy - Mpanamboatra Clamp China
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra an'ny orinasa anay, ny faribolanay dia nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao, indrindra any Amerika Avaratra. Ary misy ls voaravaka vinyl misy.
UPC Plastika Tube Clamp
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny fantsona fantsom-plastika dia ekena UPC. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra. Ary koa, izy ireo dia misy amin'ny maodely mahazatra na azo antoka plenum.
DWV Pipe Hanger ampiasaina hanantonana ny fantsom-by avy amin'ny zavatra iray
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny «hanger pipe» DWV dia afaka manome fametrahana haingana kokoa. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra. Ary koa, ny hidy fanidiana dia afaka mitazona fantsona azo antoka struktural.
Plastika Tube Tube
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra ny orinasa, ny fantson-tsinay plastika dia azo alaina amin'ny modely mahazatra na azo antoka plenum. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra. Ary koa, ireo takelaka miendrika v dia manamora ny famoronan'izy ireo ny fantsona.
UPC nankatoavina porofom-porofon-kery ABS
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, nahazo fankatoavana izahay UP-UP. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra. Ary ny famolavolana taolan-tehezana roa dia manamafy ny hoho mandritra ny fitaterana ara-drafitra.
Tady maivana U-Strap
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny adiresy maivana ataonao dia nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao, indrindra tany Amerika Avaratra. Ary koa, izy ireo dia azo namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao, ohatra, afaka namboarina tamin'ny fingotra, insert na ampinga. Ary misy fitsaboana isan-karazany noho ny safidinao: vita mialoha mialoha, Zinc plated, epoxy ary Green vita amin'ny galvanized hamaly ny filan'ireo anticorrosion isan-karazany.
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny fantsika fantsika dia natao ho an'ny fantsona 1/2 1/2 x 3/4 ″ CTS. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra.
Atsofohy ny fanitsiana vy amin'ny fantsom-by amin'ny fantsom-bolo
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra an'ny orinasa anay, ny fantsom-by ataonay dia mihazona be mpitia eran'izao tontolo izao, indrindra any Amerika Avaratra. Ary misy fitsaboana isan-karazany noho ny safidinao: vita mialoha mialoha, Zinc plated, epoxy ary Green vita amin'ny galvanized hamaly ny filan'ireo anticorrosion isan-karazany.
Tady maivana U-Strap (Copper Copper)
nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao, indrindra any Amerika Avaratra. Ary koa, izy ireo dia azo namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao, ohatra, afaka namboarina tamin'ny fingotra, insert na ampinga. Ary misy fitsaboana isan-karazany noho ny safidinao: Zinc plated, epoxy ary Green vita amin'ny galvanized hamaly ny filan'ireo anticorrosion isan-karazany.
Voapetaka vy vy Pipe Clamp Copper nopetahany takela
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny fametahana fantsom-by vy dia namboarina ho an'ny fampiatoana ny fantsom-by. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra. Ary koa, misy fitsaboana isan-karazany amin'ny safidinao: efa vita mialoha, Zinc plated, epoxy ary Green vita amin'ny galvanized hamaly ny filan'ireo anticorrosion isan-karazany.
Tady fametahana pipa vita amin'ny varahina
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny tadin-tsarimihetsika vita amin'ny varahina vita amin'ny varahina dia nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao, indrindra any Amerika Avaratra. Ary nopetahany takela-barahina izy ireo miaraka amina lavaka 1/4 ″ sy 3/16 ″.
UPC Plastika 90 ° Fastener Clamp Fastener
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra an'ny orinasa anay, nankatoavin'ny UPC izahay. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra. Ary koa, ny taolan-tehezany dia mamela ny fantsom-pivezivezy hidina mora kokoa sy mangina kokoa rehefa manitatra ny pipipa ary mifamatotra ara-drafitra.